Waa maxay sababta uu madaxweyne shariif isaga soobaxay shirka saxiixayaasha Roud map-ka?
Updated About:293 days ago 0
Madaxweynaha Somalia Shariif Sheekh Axmed ayaa shalay kusoo laabtay magaalada Muqdisho ka dib markii uu Nairobi kula soo kulmay Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Maraykanka Hillary Clinton.
Warar shalay galinkii danbe soo baxay ayaa sheegayay in Madaxweynuhu isaga soo baxay shir ay halkaas ku lahaayeen qaar ka mid ah saxeexayaasha Roadmapka.
Dhinaca kalena, La-taliyaha gaarka ah ee Madaxweyneha Somalia ee Arrimaha Dib-u-heshiisiinta Cabduqaadir X. Maxamuud Dhaqane ayaa isna ku eedeeyey xubno ka mid ah saxeexayaasha inay maamuus xumo ku sameeyeen Madaxweynaha.
Xildhibaan Axmed Cawad Casharo oo wareysi siinayay laanta afka soomaaliga ee VOA kuna sugan magaalada Nairobi ayaa sheegay in sababta uu madaxweynaha uga soobaxay shirka saxiixayaasha ay kamid tahay, in laba kamid ah saxiixayaasha Roud map-ka ay waqi badan kasoo dib dhaceen xiligii loogu talo galay inuu bilaawdo shirka taasna uu udulqaadan waayay madaxweynaha,intaas kadibna uu shirka isaga soobaxay oo uu toos usoo aaday eelaboorka,dabadeedna uu Mahiga kadaba yimid laakiin uu madaxweynaha ku gacan seyaray.
Sidoo waxaa jira warar sheegaya in qaar kamid ah saxiixayaasha ay wadaan ololo ku saabsan in lasoo hor mariyo doorashada madaxweynaha,halkii ay horay uga ahaan jirtay in marka hore ladoorto Ra’iisul barlamaanka,taasna waa qodobka labaad ee laleeyahay,waa uu kacarooday madaxweyne Shariif.
Sidoo kale waxaa lasheegayaa in qaar kamid ah maamulka ahlu suna ay iyagana shalay isku qabsadeen shirka qofkii umatali lahaa.
Hadaba waxaa xusid mudan in qilaafaadkan ay kusoo aadeen iyadoo lagu wado in 20-ka Augusto kadib wadanka ay kadhici doonto doorashada baarlamanka iyo kan madaxweynaha,lamana oga saameeynta ay kuyeelan doonto arintaan.